7 Zvino nemazuva aAhazi+ mwanakomana waJotamu mwanakomana waUziya, mambo waJudha, Rezini+ mambo weSiriya naPeka+ mwanakomana waRemariya, mambo waIsraeri, vakaenda kuJerusarema kunorwa naro, asi iye haana kukwanisa kurwa naro.+ 2 Vakaudza imba yaDhavhidhi kuti: “Siriya yava kuvimba naEfremu.”+ Mwoyo wake nemwoyo yevanhu vake yakadedera, sokuzununguswa kunoitwa miti yomusango nemhepo.+ 3 Zvino Jehovha akati kuna Isaya: “Ndapota, buda unosangana naAhazi, iwe naSheyari-jashubhu+ mwanakomana wako, panogumira mugero wedziva+ rokumusoro pedyo nomugwagwa mukuru wokumunda womugezi wenguo.+ 4 Uti kwaari, ‘Chenjerera, urambe wakanyarara.+ Usatya, uye usarega mwoyo wako uchipera simba+ nokuda kwemiromo miviri yezvitsiga izvi zviri kupfungaira, nokuda kwokutsamwa kukuru kwaRezini neSiriya nomwanakomana waRemariya,+ 5 nokuti Siriya naEfremu nomwanakomana waRemariya varangana kukuitira zvakaipa, vachiti: 6 “Ngatiendei tinorwa neJudha tiibvambure, tiitore nechisimba; uye ngatiitei kuti mumwe mambo atonge mairi, iye mwanakomana waTabheeri.”+ 7 “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Hazvingamiri, uyewo hazvingaitiki.+ 8 Nokuti musoro weSiriya iDhamasiko, uye musoro weDhamasiko ndiRezini; uye makore makumi matanhatu nemashanu asati apfuura, Efremu achaputswa-putswa kuti arege kuva rudzi.+ 9 Musoro waEfremu iSamariya,+ uye musoro weSamariya mwanakomana waRemariya.+ Kutoti muchitenda, chokwadi hamuzovi venguva refu.”’”+ 10 Zvino Jehovha akatizve kuna Ahazi: 11 “Kumbira chiratidzo kuna Jehovha Mwari wako,+ chingava chakadzika seSheori kana kuti chakakwirira senzvimbo dzokumusoro.” 12 Asi Ahazi akati: “Handisi kuzokumbira, uyewo handisi kuzoedza Jehovha.” 13 Iye akati: “Ndapota, teererai, haiwa imi imba yaDhavhidhi. Chinhu chiduku here kuti munetese vanhu, uyewo kuti munetese Mwari wangu?+ 14 Naizvozvo Jehovha achakupai chiratidzo ichi: Tarirai! Musikana+ achava nepamuviri,+ achabereka mwanakomana,+ uye achamutumidza kuti Emanueri. 15 Iye achadya ruomba nouchi panguva yaanoziva kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka.+ 16 Nokuti mukomana wacho asati ava kugona kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka,+ nyika yemadzimambo maviri auri kutya kwazvo ichasiyiwa zvachose.+ 17 Jehovha achakuunzira+ iwe nevanhu vako neimba yababa vako mazuva asina kumbovapo kubvira pazuva rokutsauka kwaEfremu achibva kurutivi rwaJudha,+ iye mambo weAsiriya.+ 18 “Zvino nezuva iroro Jehovha acharidzira muridzo nhunzi dziri kunogumira migero yorwizi rwaNire rwokuIjipiti nenyuchi+ dziri munyika yeAsiriya,+ 19 dzichauya dzomhara, dzose zvadzo, pamipata ine hova ine mawere nepamikaha yemabwe nepamatenhere ose eminzwa nepanzvimbo dzose dzine mvura.+ 20 “Nezuva iroro, Jehovha achaveura musoro nemvere dzomutsoka, achishandisa chisvo chinobhadharwa chakakumbirwa munharaunda yoRwizi,+ uye achishandisa mambo weAsiriya,+ uye icho chichabvisawo ndebvu.+ 21 “Zvino nezuva iroro munhu achachengetedza tsiru rinobva paboka nemakwai maviri zviri zvipenyu.+ 22 Nokuda kwokuita mukaka wakawanda, achadya ruomba; nokuti munhu wose akasara munyika yacho achadya ruomba nouchi.+ 23 “Zvino nezuva iroro nzvimbo dzose dzaichimbova nemizambiringa ine chiuru, inokosha masirivha chiuru,+ dzichava dzemakwenzi ane minzwa nedzemasora.+ 24 Achauyako nemiseve nouta,+ nokuti nyika yose ichangova makwenzi ane minzwa nemasora. 25 Makomo ose aichimbosakurwa zvinomera zvinonetsa nebadza—haungasvikiko nokuda kwokutya makwenzi ane minzwa nemasora; uye ichava nzvimbo yokusairira nzombe nenzvimbo inotsikwa-tsikwa nemakwai.”+